Yazisa Ngendlela Yokuzihlanza Kaolin Kule Phaseji! | HUATE
I-Kaolin iyimbiwa ejwayelekile yobumba emhlabeni wemvelo. Kungamaminerali alusizo e-pigment emhlophe, ngakho-ke, ukuba mhlophe kuyinkomba ebalulekile ethonya inani le-kaolin. Kukhona i-iron, i-organic, impahla emnyama nokunye ukungcola ku-kaolin. Lokhu kungcola kuzokwenza i-kaolin ibonakale ngemibala ehlukene, kuthonya ubumhlophe. Ngakho-ke kaolin kufanele asuse ukungcola.
Izindlela ezijwayelekile zokuzihlanza nge-kaolin zifaka ukuhlukaniswa kwamandla adonsela phansi, ukwahlukanisa amandla kazibuthe, ukufakwa kwefotation, ukwelashwa ngamakhemikhali, njll. Lezi izindlela ezilandelayo zokuhlanza ze-kaolin:
1. Ukwehlukaniswa kwamandla
Indlela yokuhlukanisa amandla adonsela phansi isebenzisa umehluko omkhulu phakathi kwe-gangue mineral ne-kaolin ukususa ukungcola okuphezulu kokukhanya kwezinto eziphilayo, i-quartz, i-feldspar kanye nezinto eziqukethe i-iron, titanium kanye ne-manganese, ukuze kuncishiswe umthelela wokungcoliseka kokumhlophe. Ukugxila kwe-Centrifugal kuvame ukusetshenziselwa ukususa ukungcola okuphezulu kokulimala. Iqembu le-hydrocyclone lingasetshenziselwa futhi ukuqeda ukugeza nokukhenketha kwe-kaolin inqubo yokuhlunga, engakwazi ukufeza kuphela inhloso yokugeza nokugaya, kepha futhi isuse ukungcola okuthile, okunenani lokusebenza okuhle.
Kodwa-ke, kunzima ukuthola imikhiqizo ye-kaolin efanelekile ngokuhlelwa kabusha kwemikhiqizo, futhi imikhiqizo yokugcina efanelekayo kumele itholakale ngokuhlukaniswa kwamandla kagesi, ukufakwa kweflash, ukubala nezinye izindlela.
2. Ukuhlukaniswa kwe-Magnetic
Cishe wonke ama-kaolin ores aqukethe inani elincane le-iron ore, ngokuvamile i-0.5-3%, ikakhulukazi i-magnetite, i-ilmenite, i-siderite, i-pyrite kanye nokunye ukungcola kombala. Ukuhlukaniswa kweMagnetic KAKHULU kusebenzisa umehluko wamandla phakathi kwamaminerali e-gangue ne-kaolin ukususa lokhu kungcola kwemibala.
Okwemagnetite, ilmenite namanye amaminerali anamandla aziwa kakhulu noma imicu yensimbi exutshwe kwinqubo yokusebenzisa, kusetshenziswa indlela yokuhlukanisa amandla kagesi ukwehlukanisa i-kaolin isebenza ngempumelelo enkulu. Kumaminerali kazibuthe obuthakathaka, kunezindlela ezimbili eziyinhloko: enye iwukubola, ikwenze kube ngamaminerali e-iron iron oxide amaminerali, bese ethwala ngokwahlukana kukazibuthe; Enye indlela ukusebenzisa i-gradient kazibuthe indlela ephezulu yokuhlukanisa amandla kazibuthe ngokuhlukanisa uzibuthe. Ngoba ukwahlukaniswa kukagesi kazidingi ukusetshenziswa kwama-ejenti amakhemikhali, imvelo ngeke idale ukungcoliswa, ngakho-ke lapho inqubo yoku-amaminerali ngaphandle kwezinsimbi isetshenziswa kabanzi. Indlela yokuhlukanisa amandla kazibuthe ixazululwe ngempumelelo inkinga yokuxhashazwa kanye nokusetshenziswa kwe-kaolin ebangeni eliphansi okungeyona eyamanani okuthengisa ezokumbiwa ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-iron ore.
Kodwa-ke, kunzima ukuthola imikhiqizo ephezulu ye-kaolin ngokuhlukaniswa kukazibuthe kuphela, futhi ukwelashwa ngamakhemikhali nezinye izinqubo kuyadingeka ukuze kuncishiswe okuqukethwe i-iron emikhiqizweni kaolin.
Indlela ye-flotation isebenzisa umehluko ongokomzimba kanye nowamakhemikhali phakathi kwamaminerali we-gangue ne-kaolin ukuphatha i-kaolin ore engcolisiwe ngokungcola okuningi nobumhlophe obuphansi, futhi isuse ukungcola okuqukethe i-iron, titanium ne-carbon, ukuze kufinyelelwe ukusetshenziswa okuphelele kokuphansi kwebanga eliphansi. izinsiza kaolin.
I-Kaolin iyiminerali yobumba ejwayelekile. Ukungcola okufana ne-iron ne-titanium kuvame ukufakwa ezinhlayiyeni ze-kaolin, ngakho-ke i-ore eluhlaza kufanele ibe sezingeni elithile lokuqina. Indlela ka-kaolinite esetshenziswa kakhulu ye-flotation indlela ye-extra emihle yezinhlayiya, indlela yokugcwalisa uketshezi oluphindwe kabili kanye nendlela yokukhetha ukugeleza ye-flccation, njll.
I-Flotation ingandisa ngokuphelele ubumsuka be-kaolin, kanti okungekuhle ukuthi idinga ama-reagents amakhemikhali futhi kubiza kakhulu, kalula ukudala ukungcoliswa.
Ukufakelwa kwamakhemikhali: ukungcola okuthile ku-kaolin kungahlakazwa ngokukhethekile yi-sulfuric acid, i-hydrochloric acid, i-nitric acid kanye nezinye izitho zokuletha ukususa ukungcola. Le ndlela ingasetshenziswa ukususa i-hematite, i-limonite ne-siderite kusuka ku-grade ebangeni eliphansi.
Ukuqunjelwa ngamakhemikhali: ukungcola kwe-kaolin kungenziwa kufakelwe izinto ezincibilikayo ngokunxuxuza, okungahlanzwa kususwe ukuthuthukisa ubumsulwa bemikhiqizo kaolin. Kodwa-ke, ukufakwa kwamakhemikhali kubiza kakhulu futhi kuvame ukusetshenziselwa ukugxila kwe-kaolin, okudinga ukuhlanzwa okwengeziwe ngemuva kokuqothulwa.
Ukuhlanzwa kokugaya: umehluko ekwakhekeni kwamakhemikhali nokuphinda usebenze phakathi kokungcola ne-kaolin kungasetjenziswa ukuqunjelwa kwezibuthe, okugazingiwe okuphezulu noma ukubhula kwe-chlorination ukukhipha ukungcola okufana ne-iron, ikhabhoni ne-sulfide ku-kaolin. Le ndlela ingathuthukisa ukwenziwa kabusha kwamakhemikhali kwemikhiqizo ebaliwe, ithuthukise kakhulu ubumhlophe be-kaolin, futhi ithole imikhiqizo enama-kaolin ebanga eliphakeme. Kepha umehluko wokuhlanza okugazingiwe ukuthi ukusetshenziswa kwamandla kukhulu, kulula ukubangela ukungcoliswa kwemvelo.
Ngobuchwepheshe obubodwa kunzima ukuthola ama-grade aphezulu kaolin agxila. Ngakho-ke, ekukhiqizeni okungokoqobo, siphakamisa ukuthi ukhethe umakhi wemishini yokuhlanza amaminerali ofanelekayo. Ukufeza ukulungiswa kokumbiwa kwamaminerali nokusebenzisa ubuchwepheshe obuningi bokucubungula ukukhulisa ikhwalithi ye-Kaolin.
Isikhathi sokuthumela: Apr-06-2020